Vaovao Samihafa Archives - Page 115 sur 210 -
45 taona namoronana : Mpanakanto maro hanotrona an’i Aristide Randrianaivo
Tsy tazana firy. Na dia mpamorona sady mpihira aza dia tsy dia fantatra loatra ny anaran’i Aristide Randrianaivo. Hankalaza ny faha-60 taonany sy ny faha-45 taona namoronany ity mpanakanto ity ary mpanakanto maro no hanotrona …Tohiny
Mpiangaly « Mozika rock » : Tsy miady na dia tsy mitovy fomba fijery aza
23/08/2017 admintriatra 0
Mozika iray nandalo vanim-potoana maro ny rock ary anisan’ny nivelatra sy nitondra karazany maro. Tsy tara amin’ny fivoaran’ny mozika rock ny mpanakanto malagasy ary maharaka ny rivotra mitsoka sy ny fivoarana any ivelany. Hita ao …Tohiny
Tantara an-tsehatra : Nilaozan’i Mamy Rajaonarivelo ny Tropy Jeannette
22/08/2017 admintriatra 0
Misaona ny tontolon’ny tantara an-tsehatra. Nodimandry ny alahady lasa teo ary namela ny tantara an-tsehatra sy ny tropy Jeannette i Mamy Rajaonarivelo. Izy ny mpisehatra lehilahy fototra tao amin’io tropy io ary ny andiany Tropy …Tohiny
Mozika kilasika : Atao fitaratra aty amin’ny ranomasimbe Indiana ny Nosy Be symphonie
Hetsika fanao isan-taona ho an’ny mozika kilasika. Miditra amin’ny andiany faha-4 ny « Nosy Be symphonie », izay ho tanterahina ny 25 aogositra ka hatramin’ny 02 septambra ho avy izao. Tanjon’ny komity mpikarakara ny hetsika ny hametraka …Tohiny
« 1 … 113 114 115 116 117 … 210 »